Korea Atsimo: Naato ny fitakiana ny mombamomba izay hiserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2010 1:51 GMT
Any Korea Atsimo , voasakana tamin'ny ora farany noho ny fanoheran'ny vahoaka ny fifampiraharahana azo hamoahana ny mombamomba ny olona maro. Nahatsapa ny olona tamin'ny ankapobeny fa lasa lavitra loatra ny fikasan'ny vavahadin-tserasera iray hanangona ny mombamomba ny tsirairay tsy tiany hiely.
Ny maha-samihafa ny Google amin'ny valan-tserasera Koreana ohatra dia noho ianao mila mameno ireo mombamomba anao sy marina rehefa hiditra mpikambana. Raha ny mikasika an'i Naver, Daum sy ireo tranonkala hafa malaza indray, dia tsy maintsy ilaina aloha amin'ny dingana voalohany ny anaranao feno sy ny laharan'ny kara-piantohanao ara-tsosialy. Aorian'ny nanoratanao ireo zavatra roa ireo, hamarinin'ny rindram-baikom-piarovana hamantarana raha ianao tokoa io. Avy eo, mila manoratra ny mombamomba anao ianao amin'ny famenoana banga maromaro ametrahanao ny adiresinao, ny laharan'ny findainao, ary indraindray ny asanao.
Nate.com dia vavahadin'ny tranonkala lehibe Koreana Tatsimo novolavolain'ny SK Telecom sady tompon'i Cyworld, Facebook-n'ny Koreana . Tamin'ny herinandro lasa, nanao dingana lehibe izy nanangona ny adiresy MAC'nireo mpikambana ao aminy sy ny anaran'ny solosain'izy ireo. Niatrika ny fanoheran'ny olona izany ry zareo tao anatin'iray andro ka niverin-dalana.
Mailaka avy amin'i Nate, milaza fa hanangona ny adiresy MAC izy.
ny laharana MAC , na ny adiresy Mac no famantarana tokana nomena ireo mpampiasa tambajotra na ireo karatra interface-n'ny tambajotra(NICs) matetika avy amin'ny mpanamboatra azy . Tsy toy ny adiresy IP izay azo ovaovaina indraindray izy, amin'ny Mac, afaka fantarinao mora foana ny mombamomba ny solosaina. Ho an'ny olon-tsotra, miasa ho toy ny laharan'ny kara-piantohana ara-tsosialin'ny solosaina ny adiresy MAC nomena azy .
Manazava i Nate fa ho amin'ny fiarovana fotsiny ihany ny hetsika ataony amin'ny fanangonana ireo mombamomba ny olon-tsotra, araka ny voasoratra ao amin'ny taratasy misy ny fanazavana’ mba hisorohana ny fampiasana tsy ara-dalàna ny tranonkala amin'ireo mpikambana ratsy saina ary hanakanana ny fampiasana tsy nahazoan-dalana ny tranokala’ . Raha tsy manaiky ny politika vaovao ny mpikambana, dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny manakatona ny kaontiny Nate izy. Nitroatra niaraka tamin'ny kiana ireo mpampiasa aterineto, fa fangalarana ny mombamomba anao tsotra izao izany, na farafaharatsiny lalana mankany amin'ny fangalarana ny mombamomba manokana ny olon-drehetra, raha vao nalefa tany amin'ireo mpikambana ireo mailaka . Maro no nandrahona ny orinasa fa hoesoriny ny Nate-ny sy ireo kaontiny Cyworld.
Manakiana ny mpitoraka bilaogy Kotone fa mahatezitra ny olona ny karazana hetsika toy izao ary manely ny ahiahy fa mety ampiasain'ny herin'ny governemanta hanoherany ny vahoakany izany mombamomba azy izany. Maneho ny hadisoana lehibe iray nataon'ny tompon'ny tranonkala SK iray hafa tamin'ny herinandro voalohan'ny volana Jolay ihany koa ny mpitoraka bilaogy. Nanokatra tsy nahy ny lalana amin'ireo bilaogy rehetra ho an'ny olon-drehetra tao anatin'ny 21 minitra ny tranonkala Egloos , ary nanome fahefana ny rehetra ny hanoratra, ny hitsara, ary hamafa izay tao anatin'ny bilaogin'ny hafa na dia tsy misoratra anarana hiditra ao anatiny akory aza .
Nilaza ny serasera SK fa ovain'izy ireo ny politika manokan'i Nate amin'ny fanangonana ny adiresy MAC sy ny anaran'ny solosaina. Mety ampiasaina hahitana ireo kiana nolazain'ny governemanta angamba ireo vaovao mikasika ny mombamomba ny tsirairay sy ny toerana ahitana ny olona tsirairay …FYI, Nanao hadisoana goavana vao haingana ihany koa ny tranonkala Egloos izay samy eo ambanin'ny fitantanan'ny vondrona SK , raha nanome ny sata maha-tompo ho an'ny tsirairay, nandritry ny 30 minitra. Noho izany, tsy mampahazo aina ahy mihitsy ity hetsika ity ary mampangotsoka ahy.
Misy tsipika manify manasaraka ny fangatahana fanampim-panazavana ho an'ny fiarovana sy ny famelana ny mombamomba anao tsy feno noho ny antony manokana. Antsoin'ny mpitoraka bilaogy DLSH 1601 hoe antsy roa lela ity zava-manahirana ity, ary alahany ireo zavatra tsara sy ratsy amin'ity hetsika ity. Taty aoriana, milaza ny mpitoraka bilaogy fa raha natao ho an'ny fisoratana fotsiny no nanaovan'i Nate izany, mety ho azo ekena ihany , nefa mila fantany ihany koa ny zava-doza mety hitranga hoentin'izany .
Miaraka amin'ny adiresy MAC sy ny anaran'ny solosaina, afaka mahita ny toerana marina misy ny solosaina ianao. Mitovy amin'ny asan'ny antsy roa lela , izany vaovao izany. Raha jerena amin'ny lafiny tsara, afaka manampy amin'ny fisorohana ny heloka be vava amin'ny aterineto izany ary mampahomby kokoa ny tahan'ny. Ary mety hampatahotra ireo olona miara-miasa amin'ireo mpanao ratsy misoloky izany . Mitovy fiasa amin'ny fametrahana ny CCTV amin'ny lala-maizina sy amin'ireo banky izany .
Etsy andaniny, raha misy mahafantatra ny adiresy MACn'ny solosaina, (miankina amin'ny hoe iza ilay ‘olona’ mahafantatra ) mety ho lehibebe kokoa ny loza mety hitranga. Miaraka amin'ny adiresy MAC, afaka manaraka tsara ireo zavatra ataon'ireo mpampiasa ny solosaina ianao ( ohatra) mandritra ny adiny iray. Tsiambaratelo fantatry ny rehetra izany fa miriorio tsy ara-dalàna amin'ny aterineto ireo logiciel izay mangalatra ireo adiresy MAC . Raha ny marina, tamin'ny taona 2008, niseho ny olana goavana mikasika ny toe-draharaha mampiahiahy izay nahitana ireo mombamomba manokana ny olon-tsotra raha nambara ampahibemaso fa misy ireo rafi-pitantana ara-bola sasany izay manangona ny adiresy MAC.
Nanohy nanakiana ihany ny mpitoraka bilaogy fa tsy ity ihany no vahaolana tokana ampiharin'ny orinasa Koreana .
Tamin'ity tranga ity, nahazo andraikitra mikasika ny fandanjana izany ny Nate On( rindram-baiko mpandefa hafatra tsindraindray ) ary hanome paik'ady matotra eo amin'ny fiarovana sy ny fandrahonana ny mombamomba ny olon-tsotra manokana. Tsy i Nate ihany no tokony handinika izany zava-misy izany. Mila manatsara ny asany ao anatin'ireo zava-tsoa roa ireo ny Microsoft sy Yahoo izay manome tolotra hafatra tsindraindray . Vahaolana antitra sy sarotra izany, zavatra iray anefa no tsara, afaka ampiasaina amin'ny fomba hafa mihitsy ny antsy araka izay itiavan'ny tompony azy .
Manakiana ny mpitoraka bilaogy Darkel fa miteny ho an'ny fironana manara-tsisiny amin'ireo orinasa Koreana izay manamaivana ny momamomba manokana olon-tsotra ity zava-doza tokana nitranga ity .
Tsy vitsy ny valan-tserasera no manontany ny anaran'ny olona, ny laharan'ny kara-piantohana ara-tsosialy, ny laharan'ny telefaonina, ny finday sy ny asa atao nefa tsy miraharaha izany. Sahala amin'ny hoe afaka ny hihinana amin'ireo mombamomba ny tsirairay izay hita ao amin'ny tranonkala nefa tsy andoavam-bola izy ireo… Fa maninona ny olona no te hahalala ny adiresinao sy ny asanao nefa mailaka, tolotra hafatra ary miditra amin'ny trano fanaovana aterineto na klioba fotsiny no tianao atao ? Nahare feo miely imbetsaka izahay mikasika ity vahaolana ity fa niha-nahazo vahana ny fironana amin'ny fanesorana ny manangona mombamomba manokana ny olon-tsotra. Tsy famantarana ny tsirairay fotsiny sy ny teny fidirana izay mahatonga ny fiarovana izany … Mino mihitsy aho fa ny handefa spam no tena tanjon'ny fanangonana ny mombamomba ny tena manokana amin'ny ankabeazan'ireo tranonkala, rehefa tsy dia misy antony ny fanamarinana ny famantarana anao. Mahazo spam amin'ny alalan'io lalana io foana isika na dia tsy lasan'ny olona hafa sy ireo vondrona hafa aza ireo mombamomba ny tena araka ny ambaran'ireo politikan'ny tranonkala mikasika ny mombamomba ny tena manokana . Betsaka ireo olona nahita fahamaroana ahazoana spam raha niditra mpikambana amin'ireo tranonkala sasantsasany .
Nampian'ilay mpitoraka bilaogy fa manomboka lasa toy ny fandaharana fahitalavitra mitovy amin'ny “Truman show” itrangana famoahana tsy nahy matetika ny mombamomba manokana olon-tsotra sy ny fisiana fakantsary mpanaramaso amin'ny toerana maro.
Mihazohazo eny amin'ny rivotra ireo mombamomba manokana olon-tsotra a, ny antsasany te hanao zavatra, ny antsasany tsy mazoto. Tsy tafasokatra noho ny fifanotofana hijery ny mpanao ratsy indrindra tamin'ny ankizy ny tranonkalan'ny governemanta vantany vao nisokatra. Niloka aho, andro vitsy taty aoriana fa hiparitaka manerana ny aterineto hovakian'ny besinimaro tsy mila fahazoan-dalana ny mombamomba ireo mpanao ratsy. Tsy te-hiresaka be loatra mikasika ny zon'olombelona ho an'ny jiolahy mpamono olona aho, fa zavatra iray no tokony ho tsaroana dia raha vao mivoaka ny mombamomba ny olona iray, tsy misy fomba intsony hamerenana azy ho tsiambaratelo indray . Maro ny olona faly tamin'ny fampidirana fakantsary mpanaramaso mba ho porofon-keloka amin'ny raharaha maro ary fakantsary mpanaramaso betsaka no napetraka amin'ny toerana maro . Ny faritanin'i Choonchung manokana dia nikasa hametraka fakantsary mpanaramaso amin'ny ambaratongam-pianarana rehetra miisa 483 ary mikasa hametraka olona manokana hanaramaso eo noho eo amin'ny alalan'ny fampiasana ireny fakantsary mpanara-maso ireny. Maro dia maro tokoa ny fakantsary mpanaramaso amin'ny fiainantsika ka manjary hahatsiarovana ny Truman show.
Na zava-misy ahatsiarovana ny “Truman” na tsia, mbola maro ireo Koreana no manontany tena hoe avy aiza no ahazoan'izy ireo isan'andro ireo spam amin'ireo mailaka sy amin'ny finday. Tsy azonao omena tsiny izy ireo raha hiahiahy ireo orinasa lehibe ho mampiely an-tsokosoko ny mombamomba azy manokana.